ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: လက်ရှိဥက္ကဌ၏ မြောက်ပိုင်းပါဂျောင် ခရီးစဉ်
နောက်က တန်းလျားဟောင်းလေးက ရဲမေဆောင်အဟောင်းလေးပါ အခုထိ မပျက်သေးဘူး အဲဒီနေရာလေး သက်ဆိုင်သူများ သိမှာပါ — with Tamar Khin and Ko Than Khe.
Ssi Las ရဲဘော်သစ်လားဟင်?...
April 8 at 5:50am · Like · 1
Ma Hnoung အဲဒီနေရာကတော့ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေကြမှာပါ
April 8 at 6:25am · Like
Nay Lin ကိုသံခဲလက်ပိုက်ထားပုံက ဒီနေရာ(တန်းလျား)မှာ ငါစိုးမိုးခဲ့သည်ပေါ့.. ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်လှိုင် ခိုင်းသမျှကူပေးခဲ့ရသည်ပေါ့ဟုတ်လား..ဒေါ်လှိုင်..
April 8 at 6:39am · Edited · Like
Kyi Kyi Nwe မြင်ရပြီဟေ့. နေကောင်းရဲ့ လား. ဆုပေးမယ်. (ဘေးကင်းပါစေ)
April 8 at 7:06am · Like
Zaw Than အခုလို နေရာဟောင်းလေးကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာပြီး ပြန်လည်လွမ်းစွက်မိတယ်ဗျာ
April 8 at 7:49am · Like · 2
Tamar Khin ကိုသံခဲ ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံလုပ်တုန်းက ဆေးဆရာ ဆရာမတွေ စုပေါင်းပြီး ကြက်သားဆန်ပြုတ်အိုးဘေး ဂစ်တာတီး သီချင်းတွေ ၀ိုင်းဖွဲ့ဆိုပြီး သူ့အတွက် မွေးနေ့ပွဲလေး ကျင်းပပေးပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေနဲ့အတူ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဖူးတယ်၊ အဲဒီတဲလေးထဲမှာ ။
April 8 at 7:56am · Like · 8
Khin Mgoo သံခဲရာ မင်း ဆီက ငါတို့ကို ပေးနိုင်တဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတခုမှ မရပါလားကွား... မြောက်ပိုက်း လက်ရှိ အဖွဲ့အတွက် အခုရော နောင်ရော အတွက် ရင်လေးလို့ မင်း တတ်နိုင်ရင် မင်း ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
April 8 at 8:07pm · Like
Win Maung ကိုသံခဲ အဖြေရကြပ်မယ့်မေးခွန်းဖြစ်နေတယ် ကို Khin Mgoo ရေ ... ။ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားကြည့်တော့ အင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်ရှားဖို့ဆိုရင် လိုအပ်ချက်တွေက အဆမတန်များလွန်းလို့ ဘယ်သူမှတာဝန်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမ...See More
April9at 10:16am · Like · 3
Maha Mingyi ရဲဘော်သံခဲသို့..........
ရဲဘော်သံခဲရေ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတုံး ငါဂိုလ်ရှယ်လေး မင်းကို ရှာတာ ပြည်တွင်းထဲမှာ မင်း မူးယစ်နေလို့ ငါ လက်လှမ်းမမှီနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်မှူးမင်းဌေး၊ ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော် အပါဝင် ကေအိုင်အေ အရာရှိတွေနဲ့ ငါတို့ ဗလငါ...See More
April9at 3:07pm · Like
Tamar Khin ရပ်နေတဲ့နေရာဆိုတော့ တိုက်ပွဲက ပါဂျောင်မှာဖြစ်တယ် ထင်တယ်၊ မဟာမင်းကြီး ဂိုရှယ်လေးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗလငါးတန်ဆိုတော့ တစ်တန်က ဖေ့ဘုတ်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်။ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ချိန်ကရော မပြင်းထန်ချိန်ကရော ဂိုရှယ်လေး ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ အပမ်းမကြီးရင် ပြောပြပါ့လား၊
April 10 at 7:29am · Like · 3
April 10 at 7:36am · Like · 1
Tamar Khin သူများတွေသာ သေရင်သေမယ်။ မင်းကတော့ မသေနိုင်ပါဘူးကြောင်ရာ။ ကိုယ်ဖော့ပညာကျွမ်းတော့ ခေါင်မိုးပေါ်တက်ထိုင်နေရင်တောင် သြိကမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကျရင်တောင် ကြောင်ကျလေးနဲ့၊ကြောင်ဆိုတဲ့နာမည် ဘယ်သူစပေးခဲ့တာလဲ မင်းနဲ့အင်မတန်မှ လိုက်ဖက်ညီတယ်၊
April 11 at 6:00am · Like
With Tamar Khin, Tun Naing, Ko Than Khe and Brang Tawng.
You, Hmone Shwe Yi and 8 others like this.
Tamar Khin ကိုစောစိုးစိုးက နယ်မြေတောတောင်အနေအထားတွေလည်း ကျွမ်းတယ်သိတယ်၊ တိုက်ပွဲအတော်များများမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်လို့ တိုက်ပွဲတွေ ကျဆုံးခဲ့ရသူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သူတွေ တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေ စာရေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်၊ အတွေ့အကြုံတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ရဲဘော်တွေအားလုံးကို ရေးကြစေချင်ပါတယ်၊
April 8 at 8:16am · Like · 2
Htay Thanhtwaykyu ကိုကရင်လေးရေးလိုက်တဲ့ အပေါ်ကကွန်မင်းလေးဖတ်လိုက်ရတာ ရင်ထဲမှာတကယ်ထိတယ် ဘယ်သူမဆိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ် ကျမတို့ ဒေသအသီးသီး တာဝန်နဲ့သွားလာနေထိုင်ခဲ့စဉ်အတွင်း မိခင်တပ်ရင်းကို မိဘအိမ်ထက်ပိုလွမ်းတတ်ကြတာ ပြန်သတိရတယ်
April 8 at 12:44pm · Like · 2
Kyawnaing Ooပြောမှနိုင်ဝင်းက၀နေတော့မမှတ်မိဘူးအပတ်စဉ်6က
April 8 at 5:55pm · Like
You, Sai Aung and6others like this.
ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးအတွင်း ကျောင်းသားတပ်မတော်(မပ)တွင် ရေဘေးသင့်ကျဆုံးသွားကြသော ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်များအား ရဲဘော်ကျော်ကျော်မှ သွားရောက် အလေးပြုစဉ်
နေရာဟောင်းလေးပေါ့ — with Khin Mgoo, Ko Mg, Brang Tawng, Tun Naing, Ko Than Khe and Tamar Khin.
Tamar Khin မိဘတွေရဲ့တန်ဘိုးကို သိနားလည်သွားခဲ့ရ။ ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာ သင်ယူလို့မရနိုင်တဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးရရှိခဲ့ရာ။ ကျောင်းသားရဲဘော်ရဲမေများ လှုပ်ရှားကျင်လည်ခဲ့ရာ နေရာလေးတွေ ခြေရာလေးတွေ၊ လွမ်းလို့မဆုံးနိုင် မကုန်နိုင်၊အားလုံးကို အမှတ်တရရှိနေလျှက်၊ ရှိနေဆဲ၊
April 8 at 5:30am · Like · 6
Ank Minzaw အားလုံးဆိုတော့ ဒိုင်းဒိုင်းလေးရဲ့ဖေဖေချစ်ကြီးနဲ့စဆုံခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်းလေးလည်း ပါမှာပေါ့နော် ဆရာမ ...
April 8 at 5:35am · Like · 2
Tamar Khin ကမ္ဘာမှာ အခိုင်မာဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံး တည်ဆောက်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံး ယူနစ်က မိသားစုဆိုပဲ၊ ချန်ထားခဲ့လို့ မဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးလေ ကိုမင်းဇော်ရေ၊
April 8 at 5:55am · Like · 5
Aung Htun အရင်ကတဲ အရင်ကလူ အရင်ကစိတ်ဓါတ်တွေ မပြောင်းမလဲ ခိုင်မြဲဆဲ..
April 8 at 1:25pm · Like · 1
Nwe Aung ပြောမတက်ဘူးတချို့တွေဂေါက်ရိုက်နေတယ်
April 8 at 2:06pm · Like
Nwe Aung သဘောပြောတာနာတက်၇င်နာကြ
April 8 at 2:07pm · Like
Sai Aung လရောင်မရှိတဲ့ တဲအုိုးငယ်လေးမှာ မထည်ဝါတဲ့ ထွန်းညှိအလင်းရောင်ရယ် ဒါပေမဲ့ ဒုို့တော့ချစ်တယ်မေ.. သီချင်းဟာလည်း မြောက်ပုိုင်းသီချင်းပါ..
April 8 at 9:02pm · Like · 1
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်မှူးမင်းဌေး၊ ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော် အပါဝင် ကေအိုင်အေ အရာရှိတွေနဲ့ ငါတို့ ဗလငါးတန် ပေါင်းပြီး အခုမင်းရပ်နေတဲ့နေရာလေးမှာ ဖျက်ထားတဲ့ဖေါင်တွေနဲ့ ခံကတုပ်လုပ်ပြီး နေစဉ် ရွာချလာတဲ့ ဗုံးတွေကို လွတ်မြောက်ရေးသံစဉ်အဖြစ် ပြတ်လပ်နေတဲ့ ရိက္ခာတွေနဲ့ နောက်မဆုတ်တမ်း သိက္ခာတွေအဖြစ် အားဖြည့်ရင်း ခုလိုတိုက်ပွဲမရှိပဲ ငြိမ်းချမ်းဖို့ လက်ခင်းသာအောင် စောင့်ပြီး လေယာဉ်လေးနဲ့ရောက်လာတဲ့မင်းကို အလေးနီပြုဖို့ ငါစဉ်းစားတာ ( ၂)ရက်ရှိသွားပြီ။ ငါ့ကို မင်း အကြံပေးပါလားကွာ။
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 11:47 AM